UL Parent Privacy Notice - SO - Edurio
Ogaysiinta Sirta Sahaminta Waalidka
Waa maxay sababta aan u qabanayno sahamintan?
Waxaad og tahay in dugsiga ilmahaagu uu qayb ka yahay ururka United Learning oo ah urur dugsiyo ku kala baahsan England.
Ujeeddada ugu muhiimsan ee laga leeyahay sahamintan waxa weeyaan in la fahmo dareenka aad ka qabto dhinacyo kaladuwan oo ka mid ah dugsiga iyo waxbarashada ilmahaaga, iyo in la soo guro macluumaad khaas ah oo ku saabsan:
Sida ay waalidku u arkaan dugsiga ilmahooda, marka ay ka eegaan dhanka adeegga macmiilka.
Tayada wadaxriiirka iyo iskaashiga ama wadashaqaynta ay la yeeshaan dugsiga.
Sida ay waalidku guriga ugu taageeraan waxbarashada carruurtooda, xataa waxa uu dugsigu samayn karo si uu waalidka uga caawiyo in ay kaalin ka sii firfircoon galaan.
Salka sharciyeed ee looga shaqeeyo jawaabaha aad adigu bixiso
Khasab kuguma aha in aad sahamintan buuxiso.Haddii aad doorato in aad ka jawaabto waxaan jawaabahaaga u isticmaali doonnaa/ uga shaqayn doonnaa sida hoos ku qayaxan. Salka sharciyeed ee aan annagu u qabanayno sahamintu waxa weeyaan in ay ka mid tahay danaha caddaaliga ah ee ururka United Learning Trust.
Shardiga aan kaga shaqaynayno xogta ku saabsan jinsiyaddu waxa weeyaan u sinnaanta fursadaha iyo habdhaqanka ama macaamilada la helo.
Waa cidma Edurio?
Edurio Ltd waa shirkadda sahaminta waxbarashada ee aan u xilsaarno in ay bixiso sahaminadayada sanadleyda ah ee shaqaalaha, waalidka iyo ardayda. Edurio waxay xogteeda ku haysaa Midowga Yurub (EU) gudihiisa.
Cidma ayaa arki doonta jawaabahayga sahaminta?
Jawaabahaaga waxaa toos loogu diri doonaa shirkadda Edurio oo jawaabaha magaca laga saaray ayaa lala wadaagi doonaa maamulaha dugsiga (headteacher) iyo kooxda hoggaanka dugsiga ee dugsiga ilmahaaga oo loo marin doono minbarka Edurio. Xogta jawaabaha qof keliya marnaba laguma bandhigi doono minbarka Edurio waxaana marwalba la isku dari doonaa jawaabaha ugu yaraan saddex shakhsi.
Waxay tani ka dhigan tahay in dugsiga ilmahaaga aanay u suurtogali doonin in uu adiga kaa garto macluumaadka shirkadda Edurio ay iyaga siiso haddii aad jawaabahaaga ku sheegi weydo wax adiga lagugu garan karo.
Jawaabaha aad bixiso koox yar ayaa weliba ku falanqayn doona xafiiska dhexe ee ururka United Learning. Adiga ama ilmahaaga la idin kuma garan doono warbixinnada ay iyagu soo saaraan marka ay isticmaalaan jawaabaha sahaminta. Dhammaan shaqaalaha arki kara xogta sahaminta ee jooga ururka United Learning iyo weliba shirkadda Edurio waxaa waajib ku ah in ay jawaabaha sir ku hayaan.
Fadlan ogsoonow, haddii aad jawaabahaaga ku bixiso luqad aanan ahayn af Ingiriisiga, waxaan weliba u baahan karnaa in aan kuwaas la wadaagno turjumaan.
Muddo intee leeg ayaan annagu hayn doonnaa jawaabahaaga?
Waxaan annagu hayn doonnaa muddo 10 sano ah jawaabaha kaladuwan ee aad bixiso. Marka jawaabaha kaladuwan la tirtiro, waxaan hayn doonnaa buundooyinka ama dhibcaha la isku daray si aan natiijooyinka sahamintan ugu barbar dhigi karno sahaminada mustaqbalka.
Sidee ayaad adigu u arki kartaa ama u heli kartaa macluumaadka aan annagu kaa hayno?
Waxaad xaq u leedahay in aad codsato nuqulka macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ururka United Learning uu adiga kaa hayo (taasoo lagu magacaabo codsiga helitaanka qofka laga hadlayo (subject access request)). Fadlan Xoghayaha Shirkadda (Company Secretary) ee ururka kala xiriir halkan company.secretary@unitedlearning.org.uk haddii aad rabto in aad adeegsato xaqan.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqdaada (si aad wax u saxdo, u masaxdo, u xadayso ka shaqaynta, u diiddo ka shaqaynta iyo xaqa aad u leedahay in aad meel kale ku wareejiso xogta) waxaad ka heli kartaa Ogaysiinta Sirta Ardayga iyo Waalidka/Daryeelaha (Pupil and Parent/Carer Privacy Notice), taasoo nuqulkeedu uu ku yaallo barta internetka dugsigaaga.
Macluumaad sharci ah
Xakameeyaha Xogta (Data Controller) ee Dugsiyada Madaxbannaan waa ururka United Church Schools Trust.
Xakameeyaha Xogta ee Akaadamiyaduhu waa ururka United Learning Trust.
Ururka United Learning waa magaca ay ku hawlgalaan labadan hay'ad ee samafal ah.
Ka shaqeeyaha Xogta (Data Processor) waa shirkadda Edurio.
Sarkaalka Dhawrista Xogta (Data Protection Officer) waa Alison Hussain company.secretary@unitedlearning.org.uk.